Hillary Clinton iyo Sanders oo Guulo ka Gaaray Doorashooyinkii la Qabtay Asbuucan – Radio Daljir
Hillary Clinton iyo Sanders oo Guulo ka Gaaray Doorashooyinkii la Qabtay Asbuucan
Maarso 6, 2016 9:04 b 0
Bacaadweyn, 06-March, 2016 -(Daljir)_Sabtidii shalay ahayd ayaa Waxaa Shan gobol oo ka mid ah kuwa dalka Mareykanka ka dhacay Doorashooyinka murashaxiintu ay ugu Tartamayaan ciddii Murashaxa madaxweynaha Mareykanka ku Meteli lahaa Xisbigooda, waxaana guulo ka gaaray guulo waaweyn doorashooyinkaan Cruz, Hillary Clinton, Trump iyo Sanders.
Murashaxiinta xisbiga Jamhuuriga ah ayaa waxay ku loolameen afar gobol, iyadoo Trump oo ku guuleystay labada gobol ee kala ah; Louisiana iyo Kentucky, iyadoo murashaxa Ted Cruz uu ku guuleystay isagana labada gobol ee kala ah; Maine iyo Kansas. Halka xildhiban Marco Rubio iyo guddoomiyaha Ohio, John Kasich ay ku Guul-darreysteen dhamaantood.
Sidoo kale, sadaasha la bixinayo ayaa sheegay in Ted Cruz uu haatan si aad ah ugu dhaw yahay murashaxa sida aadka ah ugu horreeyay dhanka doorashada Xisbiga Jamhuuriga ee Doland Trump, isagoo helay ergooyin ku dhow kuwii ka helay doorashadii shalay Trump.
Xisbiga Dimuqraaddiga; Murashaxiinta xisbiga Jamhuuriga ayaa iyaguna guul ka gaaray Saddex Gobol, waxaana Hillary Clinton ay ku Guuleystay Cod-bixintii Gobolka Louisiana, Halka murashaxa loollan adagi kala dhexeeyo ee Bernie Sanders uu isagana ku Guuleystay labada gobol ee kale ee kala ah; Kansas iyo Nebraska. Inkastoo Hillary Clinton ay Sanders si aad ah ugu horreyso dhanka ergooyinka ay kala heleen.
Dhanka kale, Ergooyinkii ay kala Heleen Musharaxiinta Xisbiga Jamhuuriga ayaa kala ah; Donald Trump oo hoggaaminaya murashaxiinta Xisbigiisa ayaa helay 378-ergo, halka Ted Cruz uu isagana helay 295-ergo.
Murashaxa Donald Trump, ayaa sheegay inuu si weyn uga Guuleystay murashaxa ay kula jiro Tartanka adag ee Ted Cruz, isagoo xusay inuu rajeynayo inuu gobollada kale ee haray uu sidan oo kale uga guuleysan dooono.
Trump ayaa ugu baaqay xildibaanka laga soo doorto gobolka Florida, Rubio inuu Tartanka isaga hago. Laakiin kama uusan hadlin murashaxa kale ee isla xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ee Kasich oo ah guddoomiyaha gobolka Ohio.
Xisbiga Dimuqraaddiga, ayaa Hillary Clinton Waxay si weyn uga horreysaa Ergooyinka ay kala haystaan – iyada murashaxa kusoo dhaw ee Sanders, iyadoo heshay 1,121 ergay, halka uu isagana ka haysto 479-ergay oo keliya.
Ugu dambeyn, Hillary Clinton ayaa ugu baaqday shacabka Mareykanka inaysan u ogolaan Murashaxiinta xisbiga Jamhuuriga inay madaxnimada Mareykanka ku guuleystaan, iyadoo sheegtay in haddii la doorto ay imaan karto in dalka uu khatar galo.
Tartankan murashaxiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa wuxuu Murashax walba dadaal weyn ugu jiraa, sidii Xisbigiisu uu ugu Xulan lahaa ka Qayb-galka doorashada weyn ee bisha November ee sannadkan ka dhici doonta waddanka, taasoo ciddii ku guuleysata ay noqon doono Madaxweynaha beddeli doona Madaxweynaha Mareykanka ee xilligaan Barack H. Obama.
Dhagaso Warkii Fiidnimo ee Radio Daljir Wariye Shaafici Cabdulqaadir Warsame (Studio Daljir Gaalkacyo)